Sacuudiga oo soo dhoweeyey tallaabo uu qaaday Mareykanka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Sacuudiga oo soo dhoweeyey tallaabo uu qaaday Mareykanka
Sacuudiga oo soo dhoweeyey tallaabo uu qaaday Mareykanka
Dowladda Sacuudiga ayaa soo dhoweeyay go’aan ay dowladda Mareykanka urur argagixiso ugu aqoonsatay kooxda Xuutiyiinta ee dagaalka kula jirta dowladda Sacuudiga ay taageeraan ee dalka Yemen.
“Wasaaradda arrimaha dibedda waxay soo dhoweyneysaa go’aanka uu maamulka Mareykanka ugu calameeyey maleeshiyada Xuutiyiinta urur argagixiso,” waxaa sidaas lagu yiri qoraal ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Saudi Press Agency.
“Tani waxay waafaqsan tahay baaqyada dowladda sharciga ah ee Yemen ee ah in lasoo geba-gebeeyo dhaq-dhaqaaqyada maleeshiyada ay tagaeerto Iran.”
Dhinaca kale taliyaha siyaasada Xuutiyiinta Mohamed Ali al-Huthi ayaa cambaareeyey go’aanka dowladda Mareykanka, wuxuuna sheegay “inay xaq u leeyihiin inay ka jawaabaan.”
“Shacabka Yemen kalama jecel go’aan kasta oo uu maamulka Trump wax ku calaameeyey, ayada oo saaxiibadooda ay dilayaan shacabka Yemen, ayna cunaha qabteen,” ayuu yiri.
Sidoo kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Iran Saeed Khatibzadeh ayaa cambaareeyey go’aanka Mareykanka, wuxuuna ka digay “in dowladda musalaftay ee Mareykanka ay sii dhaawaceyso sumcaddeeda” maalmaha ugu dambeeya ee xukunka Trump.
Previous articleKulamo looga hadlayo khilaafka doorashoyinka oo ka socda Muqdisho
Next articleAkhriso:- Magacyada Shan qof oo lagu dilay weerar ka dhacay Galgaduud